म १९ वर्षको भएँ । मैले मेरो साथीसँग एक चोटी अण्डवेयर मात्र लगाएर सम्पर्क राखेको थिएँ । मेरो प्रश्न के छ भने गर्भवती हुनका लागि योनिभित्र नै लिङ्ग पसाउनुपर्छ कि सम्पर्क राख्दा निस्किएको सर भित्री कपडाबाट योनिमा लाग्दा पनि गर्भ बस्छ कि ? बस्दैन र मेरो महिनावारीको समय कटेको पनि १२ दिन भइसक्यो । के त्यसो भए म गर्भवती हुन्छु त ? एकदम डर लागिरहेको छ, अब म के गरुँ ?
– नाम गोप्य
प्रजनन प्रणालीमा अन्य कुनै विकार नभएको गर्भ रहनु महिनावारी रोकिने प्रमुख कारण भएकाले सर्वप्रथम गर्भ रहे नरहेको पक्का गर्नुपर्छ । यसका लागि पिसाब जाँच गरेर गर्भ रहे नरहेको पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो बजारमा किन्न पाइन्छ र आफैंले पनि जाँच गर्न सकिन्छ । यदि गर्भ रहेको रहेछ तर त्यसलाई निरन्तरता नदिने हो भने सुरक्षित गर्भपतनका लागि नजिकै को सूचीकृत सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ । गर्भ नरहेको भए तनाव कारण हो जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई कम गर्नुपर्छ नत्र अन्य कारणको खोजी गर्नुपर्छ । गर्भ रहने सम्भावना भएका यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा भरपर्दो गर्भ निरोधको साधन अपनाउनु पर्छ ।